शहिदको रगतले रंगिएको यो देश किन समृद्ध भएन ? « Postpati – News For All
शहिदको रगतले रंगिएको यो देश किन समृद्ध भएन ?
पृथीछक बुढा मगर । नेपालमा शहिदहरुको संख्या कति होला ? कुनै तथ्यांकका साथ भन्न सकिदैन । लखन थापाको जमाना देखि लिएर आजसम्म गन्यो भने शहिदको संख्या लगभग २० हजारको हाराहारीमा पुग्न जान्छन् । लास नदेखिएका बेपत्ता नागरिकहरु सहित जोरजाम गर्‍यो भने त त्यो भन्दा बढी हुन्छ ।
अनुमानित आँकडा अनुसार हरेक पन्ध्र सय नागरिक बराबर एकजना सहिद छ । सहिद नभएको कुनै ठाउँ छैन । कुनै गाउँ छैन । कुनै टोल छैन । सहिदले हामी अमीर छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी कसरी गरिब भयौं ?
मुक्ती युद्ध हामीले थुप्रैपटक लड्यौं । जितको मोर्चा हामीले थुप्रैपटक कस्यौं तर पनि हामी जितेनौं र कहिलै पनि मुक्त भएनौं ।
कहिले राणाको विरुद्धमा लड्यौं । कहिले राजाको विरुद्धमा लड्यौं । कहिले बुर्जुवा संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा लड्यौं । जहिले पनि जनताको जित भयो भनियो तर जनताको जित कहाँ भयो ? जितेको जनताले इनाम के पायो ? राणा ढलेको ६८ बर्ष भयो । राजा सत्ताच्युत भएको पनि दस बर्ष भइसक्यो । दक्षिण कोरिया तीस बर्षमा समृद्धी भएको हो । तर नेपालमा भने समृद्धिको कुनै लक्षण छैन ।
हामीले कहाँ कमजोरी गर्‍यौं ? कहाँ चुक्यौं ? समीक्षा नगरी हुँदैन । सहिदहरुको बैकुण्ठ यात्रा अझै रोकिएको छैन । हामी सहिदहरुको नाम बेच्छौँ र नाफा कमाउछौँ । जसलाई हामी नाफाको जिन्दगी भन्छौं ।
उनै सहिदहरुले समाजलाई दु:ख भोकवाट मुक्त गर्न ज्यान दिए, आज उनैका परिवारहरुमा भोकमरी पसेको छ । घाइते अपांग योद्धाहरु उपचार पाएका छैनन् । हरेक नेपाली नागरिकको थाप्लोमा ३० हजार ऋणको बोझ परेको छ तैपनि हामी नाफाको जिन्दगी भन्छौं ।
मैले माथी दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिएँ । हामी उदाहरण दिन मात्रै जानेका छौँ । सपना देखाउन मात्रै जानेका छौँ । कहिले नेपाललाई स्विटजरल्याण्ड बनाउने सपना देखाउछौँ । कहिले सिंगापुर । कहिले चिनको शासन प्रणाली भित्र्याउन खोज्छौँ । कहिले बेलायती प्रणाली । कहिले युरोप अमेरिकी शासन प्रणाली ।
कहिलै नेपालमा नेपाली शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनेर सोचेनौं । कहिलै नेपाललाई राम्रो नेपाल बनाउने सपना देखेनौं । केवल निर्यातमा मात्रै निर्भर रह्यौ । यहि हाम्रो कमजोरी हो । जवसम्म यो देशमा हाम्रो माटो सुहाउँदो सपना देख्दैनौं तवसम्म हामी समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्दैनौं । यहि सहिदहरुको सपना हो ।